05 Qarnigii dahabiga ahaa: 1600-1700 - Ku soo dhowow Nederland
Laga bilaabo 1648-dii Nederland waxay ahayd dawlad madax-bannaan, muhiimmada ay caalamka ku leedahayna way sii weynaanaysay. Qarnigii 17-aad waxay xagga baayacmushtarka adduunka ka gaadhay meesha ugu sarraysa. Baayacmushtarka faa'iidada leh wuxuu dhaliyey inay Nederland yeelato dad dabaqada sare ku jira oo taajiriin ah. Qarnigan ayaa loogu yeedhaa Qarnigii Dahabiga ahaa. Taajiriintan baayac-mushtarka ahi waxay ku noolaayeen guryo waaweyn oo ku yaala kanaalada magaalooyinka ay kamidka yihiin Amsterdam iyo Leiden. Dad badan ayaase wakhtigan faqiiriin ahaa.
Wakhtigan waxay kaloo Nederland ku caan-baxday xoriyadda xagga diinta. Dad badan ayaa wakhtigan waddamada 'lage landen' la isku yidhaahdo ee Nederland ka tirsan tahay. Dad badanoo kala diimo ah ayaa magaalooyinka Nederland si nabad ah isugu ag-noolaa. Dadkuna way u qalbi furnaayeen dhaqammada cusub iyo fikraddaha sayniska.
Wakhtigan Qarnigii Dahabiga la magac-baxay dad badanoo caan ahay ayaa Nederland ka soo baxay. Tusaale ahaan Admiraal-kii caanka ahaa ee Michiel de Ruyter la odhan jirey, Hugo de Groot oo isna qareen caan ahaa, iyo ninkii filosoofka ahaa ee Spinoza la odhan jirey.
1609 ayaa seylada baayac-mushtarka ee Nederland la sameeyey. Waa hal qarni ka hor markii saylada baayac-mushtarka ee Nederland la sameeyey! Amsterdam-na waxay noqotay xarunta ganacsiga ee Yurub. Sidaasaa dadka reer Nederland u noqdeen dad aad baayac-mushtarka ugu fiican.
Marka waddamada kale loo fiiriyo dad badan ayaa magaalooyinka Nederland ku noolaa. Dadkuna tiro iskumid ah uguma noolayn waddanka oo dhan, ee meelana way ku badnaayeen, meelana way ku yaraayeen. Dadka badankoodu waxay ku noolaayeen dhinaca Galbeed ee waddanka. Gaar ahaan gobollada Noord iyo Zuid-Holland. Sababtaa daraadeed ayaa mararka qaarkood Nederland loogu yeedhaa magaca Holland, sidii iyadoo aanay gobollada kale ee Nederland muhiim ahayn. Magaalooyinka aadka muhiimadda u lahaa waxaa kamid ahaa Amsterdam, Leiden, Haarlem iyo Delft. Magaalooyinkaa waxaad ilaa iyo hadda ku arkaysaa dhismayaal badan oo qadiimi ah.
Qarnigaa Dahabiga ah dad badan oo qalaad ayaa Nederland soo booqday. Aad bayna ula yaabi jireen xoriyadda waddanka ka jirtey, gaar ahaan marka la fiiriyo dhinaca diinta iyo cilmiga kaleba. Waxay kaloo dadkani jeclaysteen guryaha fiican ee loo sameeyey agoonta iyo isbitaalada. Dadkan qalaad yaab bay ku noqon jirtey xoriyadda badan ee ay lahaayeen dumarka, dadka shaqeeya iyo Yuhuudu. Xagga meleteriga Nederland waddamo badan ayay ka horaysey, waddamadaasoo u iman jirey inay eegaan oo wax ka bartaan meleteriga Nederland. Sidoo kale Nederland aad bay uga hormartay dhinaca tignoolojiyadda. Xataa boqorkii Ruushka ayaa Nederland soo booqday, si uu fikraddo fiican uga qaato, taasoo dad badan oo reer Nederland ahi aad ugu faraxsan yihiin.